'Vanhu Vari Kubatsirana Panguva Ino; Zvirambe Zvakadaro' - Mufundisi Oliver Mandisodza
Rev Oliver Mandisodza
Mufundisi Oliver Mandisodza, veMen of Valour, Purpose and Vision Men’s Ministry, vanoti kereke yavo nevatenderi vavo vakagara vachishandisa madandemutande echizvino zvino kana kuti ‘social media’ mukuparadzira shoko raMwari nekutaurirana nevatendi vavo.
Vanoti vatenderi vekereke yavo vanonzwisisa uye vanotevedzera zvirongwa zvekuti vanhu vasaungana panguva ino yekurwisana nechirwere checoronavirus.
Mufundisi Mandisodza vanoti kunyange hazvo shoko raMwari risina zvinoridzivirira, vanhu vanofanirwa kuita zvavanoudzwa kuti vaite nehurumende dzavo.
Vanoti vatendi vavo vari kuenderera mberi muminamato yavo nemune zvese zvavanofanirwa kuita mukereke asi vachiitawo zvinokurudzirwa nevezvehutano.
Hurukuro naMufundisi Oliver Mandisodza
Mwari Vanotaura Nesu Nguva Dzose – Mufundisi Blessing Makwara
Reverend Blessing Makwara
MuBhaiberi, tinosangana nenguva zhinji apo Mwari vaitaura nevaranda vavo ivo vachikwanisa kutaurawo naIshe.
Vamwe vanoshamiswa kuti sei Mwari vasisatauri nesu sezvavaiita nguva dzavana Abraham, Moses, Job nevamwe.
Mufundisi Blessing Makwara vanoti Mwari havana kumbomira kutaura nesu.
“Tinofanira kuteerera zvikuru mashoko aMwari akauya nenhumwa dzake, kunyanya Mambo Jesu Kristu,” vanodaro Mufundisi Makwara.
Vanoti Mwari vachiri kutaura nesu sezvavaiita nguva dzakare.
“Tinoona kutaura kwaMwari nenzira mbiri. Mwari varikutaura kuburikidza neshoko ravo riri muBhaibhiri nokuti shoko raMwari ibenyu, harina kufa, harina kuwora.”
Mufundisi Makwara vanoti simba reshoko rakataurwa naMwari riripo nanhasi wese uye hariori nekuti Mwari wedu havashanduki - ndivo Mwari wedu wanezuro, nhasi namangwana.
Hurukuro naMufundisi Blessing Makwara
VOA60 World - At Least 10 People Confirmed Dead in India Building Collapse
“Hatinamati Mwari Nekuti Pane Zvatinoda Asi Nekuti NdiMwari’ – Mufundisi Oliver Mandisodza
Mufundisi Oliver Mandisodza vanoti Mwari anonzwa minamato yedu uye anoteerera zvikuru. Vanopa mufananidzo waHabakuk, uyo akasangana nenguva yakaoma akaita minamato yake asi, pekupedzisira, Habakuk akati haana kunamata Mwari nekuda kwe zvaaizowana kubva kuna Mwari, achiti akarumbidza Mwari nekuti ndiMwari.
Mufundisi Mandisodza vanoti vatendi vemuZimbabwe vashinge vachiziva kuti hapana chinogona kuitika kana nguva yaMwari isati yasvika, vachitipa mufananidzo wemwana asingagone kuzvarwa kana mwedzi mipfumbamwe isati yakwana.
Gunyana 13, 2020
‘Pakunamata Mwari Panofanirwa Kuva Nekuziva’ - Mufundisi David Simango
Reverend Doctor David Simango
Mufundisi David Simango vanoti chinhu chinonetsa ndechokuti vanhu havadzidziswi zvekunamata Mwari mumachechi mavo asi vanongoudzwa kuti varambe vachinamata chete.
“Kunamata kwezvokwadi kunosanganisa kuita. Mukaverenga Joshua 7:10, Mwari anoti kuna Joshua ‘Simuka, usaramba wakarara nechiso chako pasi ipapo; simuka upinde muguta ugadzirise muguta nokuti muguta mashata.’
Vanoti izvi zvinoreva kuti kutenda kusina mabasa kwakafa uye hakubatsiri, vachiti Mwari unoda kuti uku tinamate asi ukuwo pane zvatinoita kugadzirisa zvatiri kunamatira zvacho.
Mufundisi Simamngo vanoti Mwari anonzwa minamato yevana veZimbabwe asi vana veZimbabwe vanezvavanofanirwa kuita pamwe chete neminamato yavo.
Nyamavhuvhu 30, 2020
'Mwari Pane Chaanoda Kudzidzisa Vana VeZimbabwe' - Mufundisi Levee Kadenge
Reverend Doctor Levee Kadenge
Mufundisi Levi Kadenge vanokurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vachinamata sezvo matambudziko avakatarisana nawo achapfuura.
Mufundisi Kadenge, avo vanodzidzisa paUnited Theological College, vanoti Mwari pane chaanoda kudzidzisa vana veZimbabwe mukutambudzika kwavo.
“Kunyangwe hazvo vana veZimbabwe vari munyatwa, vasakanda pasi mapfumo emunamato; ngavarambe vakatarisa muchinjikwa nokuti hapana chimwe chichatiponesa,” vanodaro Mufundisi Kadenge.
Vanoti vanhu vasafunga kuti mhinduro yaMwari yavanonokera nekuti Mwari pane zvaanotirongera, vachiti zvekare, Mwari anoshanda nenzira dzakawanda.